ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်လူလုပ်ပြုလုပ်သော ၉၅% | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအားသာချက်ကိုရယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အမေရိကန်၏စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုရယူရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏လိမ်လည်ပြောဆိုမှုကိုပင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ရာသီဥတု»ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည် လူသားသည်လေထုထဲတွင်ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအရာများအတွက်တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သည်.
ထို့အပြင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်အမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနိုင်စွမ်းတဲ့မျိုးစိတ်ရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌တည်၏.
လေထုထဲသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်လိုသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကမ္ဘာကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည့်နည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
အဆိုပါအညီ အစီရင်ခံစာ၁၉၅၀ မှယနေ့အထိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်လူ့ပါဝင်မှုသည် ၉၂% မှ ၁၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအကြားရှိသည်။။ လူ့လုပ်ဆောင်မှုသည်မီးတောင်များကဲ့သို့သောသဘာဝဖြစ်ရပ်အချို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတန်ပြန်သောကြောင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၏သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဤနောက်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိရေများ»ပိုပူလာတယ်၊ အက်စစ်ပိုနည်းတယ်၊ အောက်စီဂျင်နည်းသွားတယ်တက္ကဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှကက်သရင်းဟေးဟိုးနှင့်လေ့လာမှု၏ပူးတွဲစာရေးသူအားရှင်းပြသည်။ ထို့အပြင်တိုင်များ၏အရည်ပျော်မှုသည်အရှိန်မြင့်တက်လာရာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုမြင့်တက်စေလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ Irma o Harvey Trump ကငြင်းဆန်နေဆဲသူတို့surelyကန်အမှန်, လာမယ့်အရာကို၏သေးငယ်တဲ့နမူနာဖြစ်ကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလူလုပ်ပြုလုပ်သည်
VIDEO - Google Earth လေထုညစ်ညမ်းမှုအချက်အလက်များကိုပြသသည်
Bonn ရာသီဥတုထိပ်သီးအစည်းအဝေး (COP23) ဖွင့်လှစ်